ပြင်းထန်သော ဒူးနာဝေဒနာဖြစ်စေသော အကြောင်းရင်းများ | Page 1116 | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
အဆင်တန်ဆာလည်ဆွဲမဟုတ်ပေမယ့် အစာဝါးတဲ့ တကြွတ်ကြွတ်မြည်သံ၊ မျိုချလိုက်တဲ့အသံတွေကနေ ဘာအစားအစာတွေစားနေတယ်ဆိုတာကို မှတ်သားပေးမယ့် စမ်းသပ်ဆဲအဆင့် ကျန်းမာရေးလည်ဆွဲလေး တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ University at Buffalo ရဲ့ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဌာနက Wenyao Xu က ဦးဆောင်စမ်းသပ်နေတာဖြစ်ပြီး “ဒီထုတ်ကုန်သာ ဈေးကွက်အတွင်းရ...
၁၆.၃.၂ဝ၁၆ | ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ
အသက်အရွယ်မရွေးကူးစက်နိုင််ပြီး ကလေးငယ်များနှင့် လူလတ်ပိုင်းများတွင် ပိုမို ဖြစ်ပွားနိုင်သော Neisseria Meningitidis ဘက်တီးရီးယားပိုးကြောင့်ဖြစ်သည့် ကူးစက်မြန်ပြင်းထန် ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ရောဂါကို ကာကွယ်ရန်-
1. လူစည်ကားသော နေရာများသို့ သွားရောက်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ။
2. လက်ကို ဆ...